I-lodge e-Dayim Point - I-Airbnb
I-lodge e-Dayim Point
Sauk Centre, Minnesota, i-United States
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Tyler
I-wifi esheshayo engu-80 Mbps, kanye nendawo yokusebenzela endaweni ehlanganyelwayo.
Indlu eyakhiwe ngamapulangwe eyakhiwe ngamapulangwe engu-4000 sq/ft ku-500 feet we-premium lakeshore, ama-acre angu-2 ku-Big Sauk Lake enhle e-Sauk Centre, MN. Amamayela angu-100 kuphela ukusuka e-Minneapolis enza lokhu kube indawo ekahle kakhulu yokuvakashelwa! Jabulela ichibi, hamba ukudoba, uphumule ngasemlilweni, futhi uvakashele izakhiwo zendawo, njenge-Dayal Point Steakhouse (ebangeni elingahanjwa ngezinyawo), indawo yokukhempa ye-Saukinac & Birchwood Resort! Idokodo liyatholakala ukuze lisetshenziswe; ukuqaliswa kwesikebhe kuqhele ngamakhilomitha angu-0.5. Ukuqashwa kwe-Pontoon ngemali eyengeziwe.
Vula umqondo wekhishi negumbi lokudlela ungena egumbini lokuphumula eliphezulu. Ikamelo elizimele eliyinhloko lihlanganisa umpheme oseceleni, i-closet enkulu kanye negumbi lokugezela eligcwele okuhlanganisa ishawa enkulu enamakhanda okufafaza angu-5. Ihhovisi/i-den futhi ezingeni eliyinhloko. Amakamelo okulala amathathu, igumbi lokuphumula negumbi lomdlalo ezingeni eliphansi elinendawo yokuhamba eya kuvulande. Izitebhisi zomoya emphemeni omkhulu zikuholela egcekeni elivulekile, langasese futhi eliyisicaba. Iningi linendawo yokugwedla esikebheni sakho, kanye namathoyizi amaningi okusetshenziswa okuhlanganisa ama-kayak amabili, namabhodi okugwedla emanzini. I-Sauk Lake inama-acre angaphezu kuka-2000, futhi iyichibi elihle kakhulu lokuzijabulisa. Izinhlobo ezingaphezu kuka-35 zezinhlanzi zenza leli libe ichibi elihle kakhulu lokudoba.
I-HDTV engu-55" ene- I-Netflix, Hulu, I-Roku, Apple TV, I-Amazon Prime Video
I-Dayim Point Steakhouse kanye nesikhungo somcimbi singaphansi kwebanga lokuhanjwa ngezinyawo. Indawo yokukhempa ye-Saukinac ne-Birchwood Resort ziseduze. I-Downtown Sauk Centre ingaphansi kwemizuzu engu-10 ukusuka, lapho ungajabulela khona izimbobo zamanzi zasendaweni, izindawo zokudlela, amathilomu, kanye ne-Sinclairwagen/Palmer House edumile. Situsa indawo yokudlela ye-Ding Dong Cafe ne-Tutti fruitti. Indawo yokudlela ye-Lorier 's Inn ivuliwe 24/7.
Ababungazi bayatholakala ngefoni, umbhalo, ne-imeyili. Bangase badlule, kodwa ukufinyelela ekhaya kuzonikezwa ngekhiphedi ye-elekthronikhi.